အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များ စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိဟု နေမာ ရှင်းလင်း၊ အသင်းအပေါ်စွပ် - Yangon Media Group
အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များ စာချုပ်တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိဟု နေမာ ရှင်းလင်း၊ အသင်းအပေါ်စွပ်
ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူး နေမာက အသင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့စဉ် က ချုပ်ဆိုထားသောစာချုပ်အတွင်း ပရိသတ်များကိုလက်ခုပ်တီး နှုတ်ဆက်ပါက တစ်လလျှင် ယူရို ၃၇၅,ဝဝဝ ရရှိမည့်အချက်အပါအ ဝင် အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာအချက် များ ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်ဆိုခြင်း မှာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
နေမာသည် ယမန်နှစ်နွေရာ သီက ဘာစီလိုနာမှ ပီအက်စ်ဂျီ သို့ ကနဦးပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရို ၂၂၂ သန်းဖြင့်ရောက်ရှိလာသူဖြစ် ပြီး ထိုစဉ်က အသင်းနှင့်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့စဉ် စာချုပ်အတွင်းပါရှိ သောအချက်များကို ပြင်သစ်မီဒီ ယာများကဖော်ပြခဲ့ရာတွင် ထူး ဆန်းသောအပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များလည်း ပါ ဝင်နေခဲ့သည်။ Mediapart ၏ဖော်ပြချက် အရ ပီအက်စ်ဂျီအနေဖြင့် နေမာ ကိုခေါ်ယူရန် ကနဦး ပြောင်းရွှေ့ ကြေးယူရို ၂၂၂ သန်းအပြင် နေမာ ၏ဖခင်နှင့် အေးဂျင့်ဇဟာဗီတို့အား ပွဲခ ယူရို ၁ဝ ဒသမ ၅ သန်းစီပေး ခဲ့ရသည့်အပြင် နေမာ၏အသင်း ဟောင်းဆန်းတို့စ်ကိုလည်း ယူရို ၈ ဒသမ ၇သန်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် နေမာကို သီတင်း တစ်ပတ်လျှင် ယူရို ၁ဝ သန်းရရှိ နေရာ၌ လစာ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ကစားသမား၏ အပြုအမူများအ ပေါ်မူတည်၍ ပေးချေခြင်းဖြစ်ရာ အချိန်မှန်ခြင်း၊ ဂျာနယ်လစ်များကို လေးစားမှုရှိခြင်း၊ အသင်း၏ပွဲများ ကို အလောင်းအစားမလုပ်ခြင်း စ သည့်အချက်များအပေါ်မူတည်၍ ပေးချေခြင်းဟု သိရသည်။ အဆိုပါ အပြုအမူဆိုင်ရာစာ ချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များတွင် ပွဲမစမီနှင့် ပွဲအပြီးတွင် ပရိသတ် များကို လက်ခုပ်တီးအားပေးခြင်း လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ယင်းအ တွက် တစ်လ ယူရို ၃၇၅,ဝဝဝ ရရှိ မည်ဖြစ်သည့်အချက်များပါဝင် ကြောင်း သတင်းများကဖော်ပြခဲ့ ကြသော်လည်း သတင်းမှားများ သာဖြစ်ကြောင်း နေမာက အင်စ တာဂရမ်တွင် ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ပီအက်စ် ဂျီနည်းပြတူချယ်က လတ်တလော အတွင်း အသင်းနှင့်ပတ်သက် သော စွပ်စွဲချက်များစွာရှိနေသော် လည်း ယင်းက အသင်း၏ခြေစွမ်း ကို သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ် ကြောင်း မိုနာကိုနှင့်ပွဲမတိုင်မီပြော ကြားခဲ့သည်။ ပီအက်စ်ဂျီသည် ဘဏ္ဍာရေး မျှခြေရှိမှုစည်းမျဉ်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ ရန် လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ဆောင် မှုများရှိခဲ့သည့်အပြင် နေမာအပါ အဝင် ကစားသမားလစာများကို လည်း မတန်တဆပေးချေနေ ကြောင်း စွပ်စွဲမှုများရှိနေသော် လည်း ယင်းအခြေအနေများက အသင်း၏ခြေစွမ်းအပေါ် ရိုက် ခတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အ မာပြောကြားခဲ့သည်။
ရလဒ်ပိုင်း ကောင်းမွန်မှုရဲ့သော့ချက်ကို ဂျာဂင်ကလော့ပ် ထုတ်ဖော်ပြောကြား
ထရန့်နှင့်ကင် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွက် လုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံး ဆောင်ရွက်ထားသည်ဟု ဗီယက်နမ် ဆု?
ဘားအံထောင် တံခါးလေးဆင့်ကို ကားဖြင့်တိုက်ဖွင့် လွတ်မြောက်သွားသူများအနက် လေးဦးထပ်မိ၊ စုစု?
အစားရှောင် အစီအစဉ်ပေးမယ်လို့ ပြောနေကြသူတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဒယ်မီလိုဗာတို